မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: Staying at Hotels VS Airbnb Apartment Pros and Cons
Staying at Hotels VS Airbnb Apartment Pros and Cons
Airbnb ဆိုတာ ဘာလဲ သိပြီးတဲ့သူတွေကတော့ ဒီပထမဆုံးအပိုဒ်လေးကို ကျော်ဖတ်လို့ရပါတယ်။ မသိသေးတဲ့လူတွေကို တစ်ခါတည်းသိသွားအောင် ဒီအခွင့်အရေးကိုယူပြီးရှင်းပြ ပါရစေ။ ကျွန်မတို့ခရီးသွားတွေ အများစုက အရင်ကဆိုရင် ခရီးသွားတိုင်း ဟော်တယ်မှာပဲ တည်းဖြစ်တာများပါတယ်။ ခုနောက်ပိုင်းတော့ www.airbnb.com ဆိုတဲ့ အင်တာနက်စာမျက်နှာကနေ အဲ့ဒိသွားမဲ့နေရာက အိမ်ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ အိမ်ခန်းတွေကို ရက်တွက်နဲ့ ငှားပြီး တည်းလို့ရပါတယ်။ တစ်အိမ်လုံးငှားတာတွေရှိသလို အခန်းပဲ ငှားတာတွေလဲရှိပါတယ်။ တည်းခိုချင်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်အိမ်ခန်း ရက်ပိုင်းနဲ့ ငှားချင်သူတွေပဲ ဖြစ်ဖြစ်က အဲ့ဒိ အင်တာနက်စာမျက်နှာမှာ အကောင့်ဖွင့်ရပါတယ်။ မိမိဓာတ်ပုံ အမှန်လဲ တင်ရပါတယ်။ ဒါမှ တည်းခိုမဲ့သူနဲ့ အိမ်ခန်းပိုင်ရှင်က တစ်ဦးနဲတစ်ဦး ဘယ်လိုပုံလဲ သိမှာပါ။ လူပုံမတင်ပဲ တခြားပုံတွေတင်ထားရင် မဗေဒါဆိုရင်တော့ မငှားပါဘူး။ ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရမဲ့သူ ဘယ်လို ဥပတိရုပ်ရှိလဲဆိုတာလဲ အနည်းနဲ့ အများအကဲခတ်လို့ရတာပေါ့နော်။ ကဲ… ဒီလောက်ဆို airbnb apartment ငှားတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ သဘောပေါက်လောက်ပြီဆိုတော့ ဟော်တယ်မှာနေတာနဲ့ Airbnb ကနေ အိမ်ခန်းငှားနေတာ ဘာတွေကောင်းတယ်ဆိုးတယ် ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံအရ ပြောပြမယ်နော်။
၁။ ရောက်ရောက်ချင်းနေ့ ဆက်သွယ်ရခက်ခဲခြင်း
ဟော်တယ်ဆိုရင် အဲ့ဒိကိုအရောက်သွားနိုင်တာနဲ့ Reception ရှိနေတယ်လေ။
Airbnb apartment တွေကျတော့ အိမ်ရှင်က အဲ့ဒိ ငှားစားတဲ့အိမ်နားမှာနေတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင် သူ့ကို ဆက်သွယ်ဖို့ အခက်ခဲရှိတယ်။ ကိုယ်က တိုင်းတပါးကို ခုမှ စစချင်းရောက်တာ။ ဖုန်းကဒ်က လွယ်လွယ်ကူကူဝယ်လို့မရတဲ့ တိုင်းပြည်ဆိုရင် သူ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့က အတော်လေး ကသိကအောက်ဖြစ်ရတယ်။
ဥပမာ။ မဗေဒါတို့ ဂရိကိုစစရောက်ချင်းနေ့က လေဆိပ်မှာ ဖုန်းကဒ်ဝယ်ဖို့လုပ်ပေမဲ့ ရောင်းတဲ့နေရာမရှိဘူး။ လိုကယ်တွေကိုပဲရောင်းတာ နိုင်ငံခြားသားတွေကို မြို့ထဲက ဖုန်းဆိုင်တွေမှာပဲ ဝယ်လို့ရမယ်တဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ်တည်းမဲ့ အိမ်ရှေ့ရောက်တာတောင် ဖုန်းမရှိလို အိမ်ရှင်ကိုဆက်သွယ်လို့မရ။ အထုတ်အပိုးတွေနဲ့မို့ ဖုန်းကဒ်ဆိုင်ကို ၂ယောက်လုံးတူတူသွားရှာဖို့ကလဲ ပင်ပန်း။ ဒီလိုနဲ့ Mr.Right ပဲ သွားရှာ ကိုယ်က အထုတ်တွေနဲ့ လမ်းပေါ်တစ်ယောက်တည်းကျန်ခဲ့။ ဂရိဆိုတာကလဲ နိုင်ငံခြားသားတွေကို ခါးပိုက်နှိုက်လုယက်တာမျိုးတွေ ကြားထားတော့ အရမ်းသတိနဲ့နေနေရတာပေါ့။
မလေးရှားသွားတုန်းကကျတော့ အိမ်ရှင်က ရှေ့တစ်ရက်ကတည်းက မတ်စေ့ပို့ထားတယ်။ သူ့အိမ်နံပါတ်က ဘယ်လောက်ပေါ့။ ရောက်ရင် အစောင့်ဂိတ်ကနေ အိမ်နံပါတ်ပြောပြီး သော့တောင်းလိုက်ပါဆိုတော့ နည်းနည်းအဆင်ပြေသေးတယ်။ တစ်အိမ်နဲ့တစ်အိမ်တော့ အဲ့လိုကွာတာပေါ့။
၂။ Checking in - Checking out
ဟော်တယ်မှာက များသောအားဖြင့် ၂၄ နာရီ Reception Service ရှိတော့ Check-in အချိန်မဟုတ်သေးပဲ စောရောက်ရင်တောင် အိတ်တွေအပ်ခဲ့ပြီး ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာ လျှောက်သွားလို့ရပါပြီ။
Airbnb apartment တွေကျတော့ သူတို့ ချက်အင်အချိန် ညနေ ၂နာရီမတိုင်ခင်စောရောက်နေလို့ကတော့ အိမ်ရှင်နဲ့ မတွေ့မချင်း အိတ်တွေတန်းလန်းနဲ့ လမ်းပေါ်စောင့်ပေတော့ပဲ။ အထုတ်အပိုးနည်းတဲ့ ရက်တိုခရီးဆိုရင် ကျောပိုးအိတ်နဲ့လျှောက်သွားနေလို့ရသေးပေမဲ့ အထုတ်များရင် ဘယ်မှသွားလို့မရပဲ အချိန်ကုန် လူပန်းပါပဲ။ မဗေဒါတို့ရဲ့ ပထမဆုံး Airbnb အတွေ့အကြုံဖြစ်တဲ့ Greece မှာတုန်းက ခရီးဝေးလို့ လူပင်ပန်းရတဲ့အထဲ ဒီလိုမျိုးတွေရှိပါလားလို့ ကြိုမသိခဲ့လို့ အတော်လေးအချိန်ပုတ် လူပန်းဖြစ်ရပါတယ်။
အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် ကာကွယ်ချင်ရင် ကိုယ်အခန်းမငှားခင်ကတည်းက အိမ်ရှင်ကို မတ်စေ့ပို့ပြီး Early Check in ကိုယ်ရောက်မဲ့အချိန်ကို ဝင်လို့ရမရ သေချာသဘောတူညီမှုရယူပါ။ Check out လဲ ဒီတိုင်းပဲ။ ကိုယ့်လေယာဉ်က ညမှထွက်မှာ သူတို့က ချက်အောက် ၁၂ နာရီဆိုရင် ကိုယ့်အထုတ်တွေနဲ့ ဘယ်သွားနေရမလဲ။ ဟော်တယ်ဆိုရင် အထုတ်တွေအပ်ခဲ့လို့ရသေးတယ်။
၃။ ပုံမှန် ဝန်ဆောင်မှုရရှိခြင်း ရှိမရှိ
ဟော်တယ်တွေမှာတည်းမယ်ဆိုရင် အနည်းနဲ့အများတော့ ဘယ်လိုဝန်ဆောင်မှုမျိုးရမယ်ဆိုတာကို ကိုယ်က သိနေပြီးသား။ အလည်လာတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် လိုအပ်မဲ့ ဝန်ဆောင်မှုမျိုးတွေအားလုံးနီးပါး ဟော်တယ်မှာ ရှိတယ်။
Airbnb လို homestay apartment တွေကျတော့ ကိုယ်ကထောင့်စေ့အောင် စဉ်းစားနိုင်ပြီး မငှားခင် မေးနိုင်မှတော်ကာကျတယ်။ ဒါတောင် စိတ်ထဲက တထင့်ထင့်စိုးရိမ်နေရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်။ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ရရှိနိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုက အိမ်ရှင်ပေါ်မူတည်ပြီး ဟော်တယ်ထက်ကောင်းသွားနိုင်သလို၊ လိုအပ်နေတာမျိုးတွေလဲ ဖြစ်နေနိုင်တယ်။
၄။ လွယ်ကူ သေချာတဲ့ ဘွတ်ကင်း ဖြစ်မဖြစ်
ဟော်တယ်တွေကို ဘွတ်ကင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ အခန်းကျန်နေသမျှ ကိုယ်သေချာပေါက်ရရင် ရတယ်။ မရရင် မရဘူး ကွဲကွဲပြားပြားရှိတယ်။ ဟော်တယ်ဘွတ်ကင်းလုပ်ရတာ ပိုလွယ်ကူသလို နောက်ဆုံးအချိန်မှ ကောက်လုပ်လဲရတယ်။
Airbnb လို apartment ကျတော့ တစ်ခါတစ်လေမှာ အနီးကပ်မှ အိမ်ရှင်က မငှားတော့ပါဘူးဆိုပြီး ထဖြတ်လိုက်တာမျိုး ကြုံဖူးတဲ့သူရှိတယ်တဲ့။ ပြီးတော့ ဘွတ်ကင်လုပ်တဲ့အခါမှာ တခါတစ်လေ တိုက်ရိုက်ဘွတ်ကင်လိုက်ရတာမဟုတ်ပဲ။ Request to book ဆိုတဲ့ အဆင့်မှာ အိမ်ရှင်ကို လှမ်းခွင့်တောင်းရတာမျိုးအရင်လာတယ်။ သူတို့က လက်ခံမှ book လို့ရတာမျိုးတွေရှိတဲ့အတွက် ဟော်တယ်လို နောက်ဆုံးအချိန် ကောက်ဘွတ်လို့မရဘူး။
၅။ ဈေးနှုန်း (အခြား ကုန်ကျစားရိတ်)
ဟော်တယ်တွေကတော့ သူ့အတန်းအစားနဲ့သူ ဈေးအသီးသီးရှိတယ်။ နေရာအချက်အချာကျရင် ကျသလို ဈေးကြီးတာမျိုးရှိတယ်။
AirBnB ကျတော့ တစ်ခါတစ်လေ ဈေးအတော်ချိုတာမျိုးတွေရတတ်တယ်။ နေရာကောင်းကောင်းနဲ့ ဈေးချိုတာမျိုးတွေ ရနိုင်တယ်။ ပြီးတော့ တော်တော်များများမှာ မီးဖိုချောင်နဲ့ တစ်ခြားအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေပါတဲ့အတွက် ချက်ပြုတ်စားလို့ရတယ်။ အဲ့ဒိအတွက် အစားအသောက်ခ သက်သာစေသလို ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့ အစားအစာလဲ စားနိုင်တယ်။ ဥပမာ။ မဗေဒါတို့ ဆန်တိုရိနီမှာဆို ဥရောပစာတွေ ဈေးကြီးပေးပြီး ကိုယ်မကြိုက်တော့ ကိုယ်စားချင်တာ ချက်စားပြီး ကျေနပ်မှုရတယ်။ (အချိန်တော့ ကုန်တာပေါ့နော်)။ နောက်ပြီး တစ်ချို့ Airbnb အိမ်ရှင်တွေက လာတောင် မကြည့်တဲ့အတွက် လူများများတည်းရင် ဈေးနှုန်း မျှဝေလိုက်တဲ့အတွက် သက်သာနိုင်တယ်။ (ဒါကတော့ သိပ်သေချာတဲ့အရာတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့)။ ဥပမာ မဗေဒါတို့ မလေးရှားက Cameron Highland က အိမ်ဆိုရင် ၈ယောက်အများဆုံးလို့ပြောပေမဲ့ တခြားဘေးက ငှားစားတဲ့အိမ်တွေမှာ သူငယ်ချင်း အုပ်စုလိုက် ၁၀ယောက်ထက်မနည်းလာတည်းနေတာတွေ့ခဲ့တယ်။
ရက်ရှည်နေမယ်ဆိုရင် Airbnb လို Apartment မျိုးက ပိုပြီး ဈေးသက်သာနိုင်တယ်။
၆။ လိုကယ်တွေရဲ့ နေမှုထိုင်မှုလို အနည်းငယ်ခံစားလို့ရ
Airbnb လို Apartment ကျတော့ လိုကယ် ရပ်ကွက်ထဲမှာနေရတဲ့အတွက် ဧည့်သည်ဆိုလို့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်းဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးတော့ ရှိတာပေါ့။ လိုကယ်တွေနဲ့ ဘယ်လောက်ထိရောနှောနေနိုင်မလဲဆိုတာကတော့ ကိုယ်ရက်ဘယ်လောက်ကြာကြာနေလဲပေါ်လဲ မူတည်မယ်ထင်တယ်။ တစ်ချို့အိမ်ရှင်တွေကတော့ ပိုပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးခင်ခင်မင်မင်နဲ့ လိုအပ်ရင်သူတို့ကို ဖုန်းဆက်မေးလိုက်ရင် သေသေချာချာပြောပြကြတာမျိုးတွေရှိတယ်။
ရက်တိုနေရင်တော့ ဘာမှ သိပ်မသိသာဘူး။ ကိုယ်ကလဲ ပြန်အိပ်ဖို့လောက်ပဲပြန်လာတာလေ။ ဘေးအိမ်မှာ ဘယ်သူတွေနေမှန်းတောင်သိရမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဟော်တယ်တွေမှာက သူတို့ အဆင့်အတန်းနဲ့သူတို့ လိုက်နာရမဲ့ စည်းကမ်းနဲ့ လုံခြုံရေး ကိစ္စအဝဝ ရှိပြီးသား။ ပြီးတော့ အောက်က လော်ဘီအဝင်မှာ သူ့ဟာနဲ့သူ လုံခြုံရေးအလုပ်သမားတို့။ မီးလောင်ရင် ပြေးရမဲ့ ထွက်ပေါက်တို့။ အရေးအကြောင်းဆို ချက်ချင်း ဖုန်းခေါ်လိုက်ရင် ချက်ချင်းရောက်လာနိုင်တာတို့ရှိတယ်။
Apartment တွေကျတော့ အိမ်ရှင်ဆီက သော့ယူပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ဖြစ်သွားပြီ။ အရေးအကြောင်းဖုန်းခေါ်လဲ သူတို့က ချက်ချင်းမရောက်လာနိုင်ဘူး။ ပြီးတော့ အဲ့ဒိ အိမ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကို ဘယ်လောက် ယုံရလဲ မယုံရလဲဆိုတဲ့ သံသယရှိနေတဲ့အတွက် စိတ်လက်တော့ အရမ်းအေးချမ်းမနေဘူး။ မဗေဒါတို့ ဂရိမှာ နောက်ဆုံးနေခဲ့တဲ့အိမ်ဆိုရင် ရေချိုးတဲ့နေရာရဲ့ နောက်နားလေးမှာ ပြတင်းပေါက်လေးနဲ့ တံခါးလေးလိုမျိုးတစ်ခုရှိတယ်။ ကြည့်လိုက်ရင်တော့ ရေပိုက်လိုင်းတွေသွားတဲ့လမ်းလိုနဲ့ တကယ်တန်းလူက အဲ့ဒိက တက်လာနိုင်သလားဆိုတဲ့ ကြောက်စိတ်မျိုးရတယ်။ သူတို့အိမ်ထဲမှာ ကင်မရာတွေဘာတွေတပ်ခဲ့မလား စသဖြင့်ပေါ့။ ပြီးတော့ အိမ်သော့ဖွင့်ရင်ကအစ ဟော်တယ်ဆို လော်ဘီထဲဝင်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ့်ပရဝုဒ်ထဲရောက်သလို ခံစားရပြီး အခန်းပေါ်တက်ဖွင့်ရတာ သိပ်မကြောက်ရဘူး။ Apartment ကျတော့ အိမ်ထဲမရောက်မချင်း နည်းနည်းစိတ်ပူတယ်။ (နည်းနည်းကြောက်တယ်)။ ဘေးအိမ်ကလူက လူကောင်းမှဟုတ်ရဲ့လား။ ရပ်ကွက်က ဂျလေဘီပုံစံမျိုးတွေရှိရင် ပိုကြောက်တယ်။ (အထူးသဖြင့် ဥရောပမှာတည်းတုန်းကပေါ့)။
ဒါပေမဲ့ အကြမ်းဖက်သမားရန်ကျတော့ ဟော်တယ်မှာက ပိုကြောက်ရတယ်။ ဒီခေတ်ကြီးကလဲ အသေခံဗုံးခွဲ ဘာညာဆိုတော့။ Apartment ကျတော့ လူနေရပ်ကွက်လိုပဲဆိုတော့ အကြမ်းဖက်သမားက သိပ် target ထားမယ်မထင်ဘူး။
၈။ လိပ်စာအတိအကျ မသိရခြင်း
ဟော်တယ်တွေဆိုရင် ဘွတ်ကင်းမလုပ်ခင်ကတည်းက လိပ်စာအတိအကျသိရတယ်လေ။ အဲ့တော့ ဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲ Google map ကနေ အရင်ကြည့်လို့ရတာပေါ့။
Airbnb apartment တွေကျတော့ သူတို့ ရေးထားတဲ့ description ဖတ်။ အောက်က တည်းဖူးတဲ့သူတွေရဲ့ Review တွေဖတ်။ ဘယ်နားနဲ့နီးတယ်။ ဘယ်မြို့နယ်မှာရှိတယ်လောက်ပဲ။ မြေပုံမှာလဲ သူတို့အိမ်ရှိတဲ့ မြို့နယ်ကို ဝိုင်းပြထားတာပဲရှိတယ် အိမ်လိပ်စာအတိအကျမသိရဘူး။ အဲ့ဒိတော့ google map တို့ဘာတို့ကနေ ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲ မသိနိုင်ဘူး။ ဘွတ်ကင်းလုပ်ပြီးတော့မှ အိမ်ရှင်နဲ့ အဆက်အသွယ်ရပြီး အိမ်လိပ်စာရတာ။ ဘွတ်ကင်ပြန်ဖျက်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ ဟော်တယ်ဘွတ်ကင်းဖျက်သလောက် မလွယ်ဘူးထင်တယ်။ တစ်ခါမှ မဖျက်ဖူးသေးတော့ မသိဘူး။
ဥပမာ မလေးရှား Cameron Highland သွားတုန်းက Apartment ဆိုရင် မြေပုံလေးနဲ့ပဲ ပြထားတယ်။ လိပ်စာသိတာတောင် Google map က သူ့ Apartment ရှိတဲ့ လမ်းထဲ ဝင်ကြည့်လို့မရဘူး။ တကယ်သွားတဲ့နေ့ကျတော့မှ လမ်းထဲ အတော်ဝင်လျှောက်လိုက်ရတယ်။ လူငယ်အတွက် ဒီလောက်မဝေးပေမဲ့ လူကြီးတွေနဲ့ ကလေးတွေအတွက်တော့ လျှောက်ရတာ ဝေးထယ်ထင်ရတယ်။ ဒီတော့ အဲ့ဒိ Apartment ကိုရောက်ပြီးရင် ပြန်မထွက်ချင်ကြတော့ဘူး။
၉။ အိမ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ အထပ်ကို သေချာမသိရခြင်း
ဟော်တယ်တည်းရင်လဲ ဘယ်အထပ်ရမယ်သေချာမသိရပါဘူး။ ပြတင်းပေါက်ခန်းရပါ့မလား၊ ရှုခင်းကောင်းပါ့မလား စသည်ဖြင့်တော့ ပူရတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ပိုက်ဆံပိုပေးပြီး upgrade လုပ်ဖို့ ရွေးစရာရှိသလို၊ ချက်အင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာ အခန်းကောင်းလေးပေးပါနော် ဘာညာပြောလို့ရတာသေးတယ်။
Airbnb apartment တွေကျတော့ သူတို့ အရှိအတိုင်းပဲလေ။ ခုနေဖူးသမျှအိမ်တွေအကုန်လုံးကတော့ အတွင်းဘက်အခန်းအပြင်အဆင်နဲ့ အသုံးအဆောင်တွေအကုန်လုံးက ပုံထဲကအတိုင်းရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့တွေ ဘယ်အထပ်မှာရှိလဲဆိုတာ မရောက်ခင် မသိခဲ့ရဘူး။
ဥပမာ။ အာသန်ပထမဆုံးနေ့စတည်းတဲ့ အိမ်ဆိုရင် ဓာတ်ပုံထဲမှာပြထားတဲ့ အခန်းအပြင်အဆင်လေးအတိုင်း အိပ်ယာခင်းတွေ မီးဖိုချောင်လေးတွေ ချစ်စရာလေးတော့ ရပါတယ်။ တကယ်တန်းကျတော့ မြေအောက်ထပ်အခန်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ ပြတင်းပေါက်မရှိဘာမရှိ။ အိမ်ထဲဝင်ဖို့ မြေအောက်ထဲ ဆင်းရတာတင် စိတ်ထဲ ကြောက်မိတယ်။ အထဲရောက်သွားရင်တော့ မကြောက်တော့ဘူးပေါ့နော်။
မလေးရှာ Cameron Highland တုန်းကလဲ သူက ဝရံတာက အပြင်ပုံကိုရိုက်ထားတာ တင်ထားပေမဲ့ အဲ့ဒါ ဘယ်နှထပ်လဲ မသိနိုင်ဘူး။ ဟိုရောက်တော့ ပထမထပ်ဖြစ်နေတယ်။ သူ့လဲ အပြစ်ပြောလို့မရဘူး။ သူ့ဓာတ်ပုံထဲကအတိုင်းတော့ ရှုခင်းကရတယ်။ အပြင်မှာ သိပ်မလှတာပဲရှိတယ်။ ကော်ရိုက်တာတစ်လျှောက်ကလဲ နည်းနည်းမှောင်ပြီး ဘေးခန်းတွေကလဲ အလုပ်သမားတွေစုနေတဲ့ အိမ်တွေလိုပဲ။ မိသားစုလိုက်သွားပြီး အုပ်စုတောင့်လို့ သိပ်မကြောက်တာ။
ဒီတော့ အဆုံးသတ်မှာပြောချင်တာက ဘယ်မှာပဲနေနေ သေသေချာချာ ထောင့်စေ့အောင် စစ်ဆေးမေးမြန်း။ Airbnb apartment ဆိုရင် Checkin- check out time နဲ့ ကိုယ့်လေယာဉ်ချိန်ကို သေချာ ညှိ… ကိုယ်ကတော့ ကိုယ်ကြုံခဲ့တာနဲ့ ကိုယ်မစဉ်းစားမိခဲ့လို့ ဖြစ်ခဲ့တာကို နောက်လူတွေထည့်စဉ်းစားနိုင်အောင် ရေးပေးတာ။
Airbnb apartment တွေကို မကောင်းဘူးလို့ မဆိုလိုဘူး ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘက်က တစ်ချက်မှ လွတ်လို့မရဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အကြံပေးချင်တာက ကိုယ်ရောက်ရောက်ချင်းနေ့နဲ့ ပြန်မဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ခရီးစဉ်ပေါ်မူတည်ပြီး ဟော်တယ်နေသင့်ရင်နေ။
Airbnb မှာနေမှ ဝါရင့် ခရီးသွားကြီးဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဟိုတယ်ထက်စာရင်တော့ လိုကယ်တွေရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝတွေကို ပိုလေ့လာနိုင်သလို၊ သာမာန်ခရီးသွားတွေထက်တော့ ပိုအတွေ့အကြုံ ရနိုင်မယ်။ အိမ်ရှင်ဆီကနေ လိုကယ် tips တွေရနိုင်မယ်။ အဆင်ပြေမပြေ၊ ဈေးချိုမချိုစသဖြင့် တခြား အချက်အလက်တွေထည့်စဉ်းစား။ တစ်ခါတစ်လေတော့ နေရာကောင်းလေးတွေမှာ airbnb apartment တွေက ဟော်တယ်တွေထက် ဈေးတအားသက်သာတာမျိုးတွေရှိတတ်တာကျတော့ ကိုယ့်အတွက်ကောင်းတယ်လေ။ မဗေဒါအတွက်တော့ နောက်ဆိုရင် အုပ်စုမတောင့်ရင် ဟော်တယ်ပဲနေဖြစ်ဖို့များတယ်။
အောက်ကပုံလေးကတော့ အရိုးရှင်းဆုံး ရှင်းပြထားတာလေးပေါ့။ ကိုယ်လိုချင်တာ ကိုယ်ရွေးပေါ့နော်။
Posted by mabaydar at 5:55 PM
Labels: Greece , Knowledge , Malaysia , Travel Tips , ခရီးသြားမွတ္တမ္း
ဖတ္ မွတ္ သြားပါတယ္...
7/26/2016 6:14 PM
Thank you for your post and really good for travel knowledge. I think Airbnb apartment is good for family trip. Waiting your review Cameron Highland trip.